Here nọ ebe a: Home » Logocloud: ego efu nke ndị na - ahụ maka ọgwụgwọ na - ekwupụta
Emepụtara peeji a ka ihe mberede COVID-19 nke na-egbochi ohere ịnye ihe yana ohere inwe usoro ọgwụgwọ okwu. Ndị na-ahụ maka okwu okwu ị hụrụ na peeji a ejirila mmesapụ aka kesaa ngwa ọrụ ha iji nye ụmụaka na ndị okenye aka inwe ihe ha ga-eme n'ụlọ ka na-eche ka ịmaliteghachi omume ọrụ. Ekele m na-erite site na ha niile.
Peeji a enweghị ngwa weebụ m mere, nke dị n'efu na GameCenter site na TrainingCognitivo. Ka izipu m njikọ na azụmahịa ma ọ bụ ihe biko zitere m email na [Email na-echebe] ịkọwapụta aha gị, isiokwu nke ọrụ yana nkọwa dị mkpirikpi maka onye ga-eji ya. Ọ dị mkpa na ihe e zitere anaghị enwe foto ma ọ bụ ọdịnaya nke ikike nwebisiinka chebere. Nkwanye ugwu ndi okacha amara nke ndi oru ibe ha, ihe edeputara bu ndi n’enwetaghi aka edeputara.
Lelee ihe oyiyi S + site na Sara Frizzarin
Lelee eserese mbụ + S + site na Sara Frizzarin
Syllables na S (chọpụta ihe zoro ezo) site na Sara Frizzarin
Zobe ma kọọ akụkọ "Hedgehog, squirrel ma fega" nke Sara Frizzarin dere
Tulie elu ma kọọ akụkọ "Nru ube Tiffi" site na Sara Frizzarin
Dakọtara ahịrịokwu a na ihe onyonyo a (1) nke Alberto Mariotto dere
Dakọtara ahịrịokwu a na ihe onyonyo a (2) nke Alberto Mariotto dere
Anyị na-agụ ... GH / Kra nke Elena Angelucci
Gụọ ahịrịokwu ma jikọta ya na onyonyo ziri ezi nke Alice Martinelli dere
Egwuregwu n'ime ụlọ / n'èzí nke Diletta Ruggeroni
Etu esi eji ya: N’ime ihe omume ndi a, ejikọtara ụda na agba na agwa, Ọrụ nwata ahụ bụ ịmata ma ụda ahụ okenye kwuru ya dabara na agwa mbụ ma ọ bụ nke abụọ. Dịka ọmụmaatụ, oge ọ bụla okenye kwuru okwu syllable SA, nwatakịrị ahụ ga-egosipụta okirikiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na elu ihuenyo ahụ iji kwalite agwa. Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, okenye na-akpọ FA, nwatakịrị ahụ ga-egosi okirikiri odo odo. Obviously nwere ike dozie ọrụ site n'ịgwa nwatakịrị ahụ ka ọ mepụta usoro kwesịrị ekwesị, ebe okenye ga-echele ụdị ụda ọ nụgoro.
Egwuregwu nke ọgazị C / CIA mbụ ahụ
Egwuregwu Goose na etiti CA / CIA
Semantics - Kedu ihe onye ahụ na-egbochi
Semantics - myirịta na ọdịiche
Nkọwa: mgbe ị jikọtara ụda / s / ya na agwọ ahụ na / ts / ụda na scissor, bido ihe ngosi, pịa akụ aka nri ma gee ntị ụda ma ọ bụ sụgharịa ma jụọ nwa ahụ ka ọ metụ agwọ ahụ ma ọ bụ isi ya aka. dabere na ụda a nụrụ, onyonyo nke dabara adaba ga-agaghari naanị mgbe anyị jiri òké pịa ya.
Nghọta Lexical - mmefu
Nkọwa: bido ihe ngosi, gwa nwa ahụ ka o metụ nri aka site n'ịgụ ya n'isi aka nri, pịa akụ ahụ nri ga-aba na ụgbọ.
Nkọwa: bido ihe ngosi ma gwa nwa ahụ ka o metụ onye na-etinye ya aka, foto dị mma ga-agagharị naanị mgbe anyị ji òké wee pịa ya.
Nkọwa: malite ngosi ma rịọ nwatakịrị ahụ ka ọ bitụ ihe onyonyo nke malitere dị ka nke ahụ dị n'etiti, mgbe nwatakịrị ahụ metụrụ ihe osise aka nri, pịa akụ aka nri wee mee ka nkwalite ahụ pụta.
Nkọwa: bido ihe ngosi ahụ wee gụpụta nkeji okwu, gwa nwa ahụ ka o metụ onyonyo nke ga-amalite site na nkeji ahụ, mgbe nwatakịrị ahụ metụrụ ihe osise aka nri, pịa akụ aka nri iji mee ka nkwalite ahụ pụta.
Echiche gbasara ohere: olee ebe ọ nọ?
Nkọwa: na ppt ndị a niile na mbido slide ị nwere ike jụọ nwatakịrị ahụ "kedu ebe X dị?", Mgbe nwatakịrị zara (dịka ọmụmaatụ "na nkata"), na-pịa akụ aka nri na foto ahụ apụta (dịka ọmụmaatụ nkata) na, ịpị ọzọ, nkwalite na-egosi.
N’ime slides ikpeazụ, n’aka nke ọzọ, ị nwere ike ịkwalite nhazi nke ahịrịokwu dị mfe gbasaa site n’enyemaka nke ahịrịokwu agba: ị nwere ike jụọ nwatakịrị ahụ "gịnị na-eme?" Na ịpị akụ aka nri, otu ikpe nke ahịrịokwu ga-apụta n'otu oge.
Nkọwa: n’ime faịlụ a
Egwuregwu nke ọgazị ihe atụ
Nkọwa: N'ihe egwuregwu a dị nro dị mma iwu dị na ya.
Iji kpọọ egwuregwu ịchọrọ itinye faịlụ ahụ na ọnọdụ ngosi. Cal na-agbakọ ọnụ ọgụgụ nke igbe ebe ị bịarutere, a ga-eziga gị na slide na akpaghị aka ka ị ga-eme ihe ngosi. Omume ọ bụla nwere ihe na-akpali akpali na pịa nke òké.
Iji jiri egwu ahụ laghachi ihuenyo ahụ, sọsọ na akara Minni na ala.
Naanị ntụpọ .. enweghị pawns mana ... anyị na-azụ ebe nchekwa na-arịọ nwata ka o cheta ọnọdụ ya !!
Ihe ngbanye aka nke agwo ahihia n’oghere - / sp / intervocalica
Nkọwa: bido ihe ngosi. The nwatakịrị na-ekwughachi naanị okwu na-acha ọbara ọbara, wee pịa otu ugboro ma na-eche ka ndị na-aga aga na-eme
Amalite na… syllable MA-SA
Echiche omumu ihe omumu - ebe Dade na Lili no
Egwuregwu Goose na / k / median
Nkọwa: Ọ bụrụ na okwu ndị ahụ bụ otu, ozugbo nwatakịrị zara aza nke ọma, pịa bọtịnụ oghere ma ụmụ nke otu ụmụaka ahụ ga-ebugharị, ọ bụrụ na okwu ndị ahụ dị iche, pịa akụ aka nri. Mgbe otu n’ime di na nwunye abụọ ahụ rutere nso na nkata ahụ, okwu ahụ bụ “ezigbo mma” ga-apụta.
Etu esi eji ya: Faịlụ nha okwu enyere gi aka ikuzi ncheta gi. Ihe omume a bụ icheta okwu ndị a gụrụ na ikwughachi ya n’olu dara ụda, mgbe ọtụtụ mkpali (1 ma ọ bụ abụọ) gasịrị, mgbe akụkụ anọ ahụ gbara edo edo ma cha cha. Iji jiri faịlị tinye ya na ngosi ma jirizie òké ma ọ bụ ogwe oghere, mee ka ihe ngosi ahụ gaa n'ihu. Enwere ike idozigharị ike ya, enwere ndepụta 2 ugbua na oge dị ka 4 na nke nwere ogologo oge 1, sọsọ tinye okwu ọhụrụ na akụkụ anọ.
Etu esi eji ya: Kaadi maka inye aha ngwa ngwa, mana na stroop mode
Nkọwa: Mgbatị ahụ bụ PASAT: na ọnọdụ ngosi, a gwara gị ka icheta ọnụọgụ ndị ị hụrụ na mbụ wee tinye ya na ihe ị bụ
ekiri. Maka ụmụaka nwetagoro mmega ahụ, agba ndị na-eme ka o kwe omume ịmebido ọrụ a, dịka ọmụmaatụ:
agba na-agbanwe agbanwe maka mgbanwe ọrụ (dịka ọmụmaatụ site na + any)
Nkọwa: A gwara gị ka ị kpọọ onye ogugu aha ya ma kaadi a achapu, mgbe n’inwere agba kaadi ma o buru acha. Maka ụmụaka nwere ahụmịhe, ụcha nwere ike jikọtara ya na otu iwu (dịka ọmụmaatụ: "kọọ aka gị mgbe acha ọbara ọbara", ma ọ bụ "ekwula ihe ọ bụla mgbe edo edo").
Egwuregwu lynx - egwuregwu nlegharị anya
Nkọwa: Ngosipụta nke ike nwere ọtụtụ ihe mezuru iji na-akpali ncheta, ile anya, anya. A gwara onye ọrịa ka ọ lelee ma buo usoro na agba nke agba na ụdị dị iche iche. Mgbe egosichara usoro nke ọ bụla, a ga-agwa ndị ọrịa ka ha rụọ ọrụ. Site na mmezu nke ihe achọrọ, achọrọ ka ịdekọ usoro nke agba / ụdị dị iche iche gosipụtara, na-eso njirisi.
Na ọkwa mbụ, a ga-ewetara nwatakịrị ahụ kaadị abụọ: kaadi ọ bụla nwere anụmanụ, agba na ọnụ ọgụgụ. Ngosipụta nke kaadị a ga-ewe 5 sekọnd na nwa ga-eburu nọmba na anụmanụ nke kaadị abụọ ahụ. Emechaa ihe ngosi ahụ, a ga-agwa gị ka icheta nọmba ma ọ bụ anụmanụ ahụ.
N'ikpeazụ, n'ọkwa nke atọ, na mgbakwunye na iburu ọnụ ọgụgụ ahụ, anụmanụ na agba nke kaadị ọ bụla, nwatakịrị ahụ ga-akpachara anya n'ihi na ndị na-adọpụ uche ga-apụta n'oge ikpughe kaadị ndị ahụ.
Nkọwa: nwatakiri ahụ ahụ ihe onyonyo ahụ ma gha ede ederede ziri ezi, ozugbo ọ nwesịrị nzaghachi anya iji chọpụta izizi nke azịza ya
Tebụl ibe egwuregwu (ugboro 8 tebụl)